साबधान ! कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर फैलिने सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियो यस्तो संकेत – List Khabar
Home / समाचार / साबधान ! कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर फैलिने सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियो यस्तो संकेत
साबधान ! कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर फैलिने सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियो यस्तो संकेत
admin July 23, 2021 समाचार Leaveacomment 16 Views
सरकारले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर फैलिने चेतावनी दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिम बढिरहेको भन्दै रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यान्वयनमा हेलचेक्र्याइँ नगर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै जनस्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउन नसकिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले सो आग्रह गरेको हो । अहिले पनि नागरिकहरू भौतिक दूरी कायम नै नगरी आवतजावत गरिरहेका छन् । यस्तै, सभा सम्मेलनसमेत सुरु हुन थालेका छन् ।
विगत एक सातायता संक्रमित हुने दर बढ्दो क्रममा रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकासहित धेरै जिल्लामा पछिल्लो समय संक्रमण बढ्दै गएको छ ।
काठमाडौंसहित ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, सुनसरी, झापा, चितवन, कास्की, रूपन्देही र कैलाली जिल्लामा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या ५ सयभन्दा बढी पुगेको छ । यस्तै, २ सयभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लाको संख्या २६ पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या २७ हजार ३ सय ७५ पुगेको छ ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। समिरकुमार अधिकारीका अनुसार संक्रमणको बढ्दो अवस्थाले चुनौतीपूर्ण तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै अस्पतालका शया र अक्सिजन चुस्त दुरुस्त राख्न आग्रह गरिएको छ ।
Previous सूर्यविनायकको जङ्गलमा भेटियो मानव कङ्काल
Next प्रहरीले पक्राउ गर्यो यी ३ ब्याक्तिलाई, अमेरिकामा रहेकी दिव्या राणाले पनि खेलिन यो खेल !